Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » I-Alaska Airlines ukuphinda iphinde ishedyuli epheleleyo ePaine Field ngentwasahlobo yowama-2022
I-Alaska Airlines icwangcisa ukuphinda ishedyuli yayo yonke yokuhamba okungapheliyo kwe-18 yemihla ngemihla ePaine Field-Snohomish County Airport ngentwasahlobo yowama-2022, ngaphambili.
Nge-8 kaSeptemba, iAlaska Airlines izokutsiba ukuya kwiindawo ezili-11 zemihla ngemihla ukuya kwiindawo ezisixhenxe njengoko isongeza iinqwelomoya ezimbini ngosuku eBoise naseSpokane, kunye neenqwelomoya zesibini zemihla ngemihla ukuya eLas Vegas nasePhoenix.
Ngo-Okthobha i-7, iAlaska Airlines ibuyisa uhambo lwayo lwonyaka ukuya ePalm Springs
Nge-19 ka-Novemba, iAlaska Airlines izakuphehlelela inkonzo yayo entsha yeTucson, enye indawo ethandwayo yokufudumeza ubusika entlango
Ngokuzithemba okwandayo kokuhamba komoya kukonyuka okuzinzileyo ukubuyela kumanqanaba angaphambi kobhubhane kunyaka olandelayo, Alaska Airlines iceba ukuphinda iqhubeke ishedyuli epheleleyo ye-18 yemihla ngemihla yokuhamba ungamisi ePaine Field-Snohomish County Airport ngentwasahlobo yowama-2022, ngaphambili. Isikhululo seenqwelomoya e-Everett, emantla e Seattle, sihlala sithandwa kakhulu ziindwendwe zeAlaska Airlines.
Njengengxenye yendlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo, iAlaska Airlines iyakube isuka kuhambo lwemihla ngemihla ePaine Field emva kokuwa - ukusuka kwisihlanu ngoku - njengoko sibuyisa iindawo ezininzi, sonyusa amaza okuhamba ngenqwelomoya kwaye songeze nendlela entsha eya eTucson, eArizona.
"Ngokuqinisekileyo bekubanzima, kodwa ukuzibophelela kwethu kwiPaine Field khange kuyekelele," utshilo uBrett Catlin, usekela mongameli wenethiwekhi kunye nemanyano eAlaska Airlines. “Iindwendwe zethu ziyakuthanda ukuthandwa sisikhululo seenqwelomoya. Kunyaka olandelayo, njengoko siqhubeka nokubonelela ngeenqwelo-moya ezongezelelekileyo, siya kuba nakho ukuphinda siqhubeke nolwabiwo lwethu olupheleleyo lokuhamba okuyi-18 yonke imihla kwiindawo esiya kuzo iindwendwe zethu. ”
Nge-17 kaJuni, iAlaska iza kubhabha iye kwiindawo ezintlanu ukusuka e-Everett: Las Vegas, Orange County, Phoenix, San Diego nase San Francisco Nazi ezinye izinto ezingaphambili kwiPaine Field:
Nge-8 kaSeptemba, iAlaska Airlines iya kuthi xhaxhe kwiindawo ezili-11 zokuhamba yonke imihla ukuya kwiindawo ezisixhenxe njengoko isongeza iindiza ezimbini ngosuku kuzo zombini iBoise neSpokane, kunye neenqwelomoya zesibini zemihla ngemihla ukuya eLas Vegas nasePhoenix.
Ngo-Okthobha i-7, iAlaska Airlines ibuyisa uhambo lwayo lwonyaka ukuya ePalm Springs.
Nge-19 ka-Novemba, iAlaska Airlines izakuphehlelela inkonzo yayo yexesha elitsha eTucson, enye indawo yokubaleka yokufudumeza ubusika entlango.
Oko kuthetha ukuba, kanye ngexesha lokuhamba kweholide, iAlaska iya kuba nokuhamba kwemihla ngemihla eli-13 ukuya kwiindawo ezisithoba ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Puget Sound ekulula ukungena nokuphuma kuso.
I-IMEX ihambisa incoko ngokudibeneyo kwifomathi entsha
Iindaba zokuhamba eMexico
ICaribbean yaseMexico ibhiyozela unyaka omnye wokuvula kwakhona
Izizathu zomoya we-AirAsia iipesenti ezingama-90 zeenqanawa phakathi kokuqhambuka kwesifo secoronavirus